Positano yi kwilali cliffside kwi kumzantsi waseItali Truck. Ngokutsho ilivo owadalwa kweneptune, uTHIXO wolwandle owayephume uthando yenimba. Beachfront Its nembewu kunye amawa, kwizitrato ezincinane lwenziwa nge shops kunye zokudla loko idume. Wena kunye neqabane lakho kufuneka utyelele Chiesa di Santa Maria Assunta obonisa icon yaseByzantium ngenkulungwane-13 le-Virgin Mary.
like ukunyathela ephupheni, Positano yindawo ogqibeleleyo ukuba sibhiyozele ukuba uthando! Kukho kakhulu ukwenza; hlengisa kuxa uqinisekile ukuba uhambo of a ebomini.
Xa kufikwa ekufumaneni yakho Iindawo Honeymoon kakhulu eYurophu, Hvar, Croatia Kudla kwi izibini kwizintlu! Umhlathi-wawisa ubuhle bendalo, iidolophu zakudala ezibiyelweyo, kunye neblue engapheliyo yeAdriatic: I-Croatia lukhetho oluhle kwi-honeymoon emfutshane okanye ikhefu lothando. Inala kwelanga, izidiliya, okukhethwayo restaurant, Uza kuthanda xa uthandana naye eYurophu kule ndawo intle kangaka.
Esi sixeko sincinci sibiyelweyo sigcwele ubugcisa besiGothic yindawo efanelekileyo izibini ezifuna vibes ekhululekile ngembali encinci kunye nokubona indawo emini. Nangona losuka yenye yeendlela eziphambili ukubona Croatia ngokubanzi-yaye nantsi eyona nyaniso, also a great way to arrive on a elathathalukhule kule nyanga, Linganisa ifike ngokusesikweni kummandla, kodwa ngokuqinisekileyo hayi ngendlela ucinga.
Swizalend might not be the first place to come to mind when you think of Honeymoon Destinations In Europe, kodwa ke ngokuqinisekileyo into ekufaneleke ukuba siyicinge. Nangona amancinci ngobukhulu xa kuthelekiswa yamazwe aseYurophu, Switzerland anazo ubuhle obumangalisayo bendalo. imizana amahle, imizi obuphezulu, ubutyebi belifa lenkcubeko, kunye nemvelaphi eyothusayo kwiholide yakho yomtshato nokuba undwendwela ebusika, spring, ihlobo, okanye bawe.
ikomkhulu Italy kukuba kumnandi izibini kushada. yenye yezona batyelela kuluhlu Honeymoon zokufikela EYurophu, Uze ube ngogqibeleleyo ukuze axhamle kwiintsuku zokuqala ezimbalwa yobomi esitshatileyo. ukusuka yayo izitrato cobbled neebhakana ukuba olondolozo lwembali, zemidlalo, yothando zokudlela, uya kuba namava amaninzi okwenza kunye.
Kufuneka utyelele The zemiboniso bamaRoma! Bona baziwa kwihlabathi lonke ukuba ubungangamsha babo ingqalelo iinkcukacha. zemidlalo Empty kukho emehlweni ukondele. Xa iqala ukungqinelana nemidlalo yegcisa leopera, amava Kunzima ukuchaza.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala nge link kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhoneymoon-destinations-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)